अस्पताल Archives | Page5of6| Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - गोरखाका पाँच जनामा देखियो स्वाइनफ्लु - page 5
३० साउन, काठमाडौं । गोरखाको गाँखुका तीन र लक्ष्मीबजारका दुई जनामा स्वाइनफ्लु रोग लागेको पुष्टि भएको छ । एक साताअघि धेरै जनामा रुघाखोकीको समस्या देखिएपछि जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले बिरामीका नमूना राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला काठमाडौँमा परीक्षणका लागि पठाएको थियो । परीक्षणमा स्वाइनफ्लुका जीवाणु भेटिएपछि बिरामीलाई स्वाइनफ्लु लागेको पुष्टि भएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
२९ साउन, काठमाडौं । प्रा डा गोविन्द केसीका माग सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिले मुलुकमा भएको प्राकृतिक प्रकोपमा चिकित्सा सेवाको अपरिहार्यता र आफ्नो बिग्रदो स्वास्थ्यलाई समेत मनन् गर्दै तत्काल अनशन अन्त्य गर्न डा केसीसँग हार्दिक अपिल गरेको छ ।	थप पढ्नुहोस्
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको स्वास्थ्यमा सुधार, डिस्चार्ज हुन केही दिन लाग्ने
२३ साउन, काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था सुधार भएको छ । भक्तपुरको गठ्ठाघरस्थित नागरिक कम्युनिटी अस्पतालमा गत २१ गते प्रोस्टेट अर्थात मूत्रथैलीको शल्यक्रिया गरिएको थियो । अस्पतालमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा राकेश बर्माको नेतृत्वको चिकित्सक टोलीले उनको शल्यक्रिया गरिएको र उनको स्वास्थ्य अवस्था सुधार आएको अस्पतालका निर्देशक श्रीभक्त कासिछ्वाले जानकारी दिए । अस्पतालमै उनको उपचार भइरहेको र केही दिनमा घर पठाइने उनले बताए ।	थप पढ्नुहोस्
१९ साउन, काठमाडौं । मेरो ठुलिआमाको कुनै दीर्घरोग थिएन । ठुलिआमाको बोलाउने नाउँ गोमा लामिछाने हो । नागरिकतामा नन्दकुमारी लामीछाने छ । ठुलीआमाको चाबहिलमा च्याउ पसल थियो । च्याउ पसलमा डाक्टर च्याउ किन्न आउँने जाने क्रममा चिनजान भएको थियो । चिने जानेको डाक्टर हुँदा जिउमा केही समस्या हुँदा डाक्टर समक्ष उहाँले भन्ने गर्नुभएको रहेछ । केही समय अगाडि आफु बिरामी हाँदा डाक्टरले बनाएको रिपोर्टहरु उहाँले डा कमल कोइरालालाई दिनुभएको रहेछ । सो रिपोर्ट डा कमल कोइरालाले हेरे पछि बिरामीलाई सो केश बढ्दै गएपछि क्यान्सरको खतरा हुनसक्ने बताएका रहेछन् ।	थप पढ्नुहोस्
१२ साउन,काठमाडौं । नेपाल रेडक्रस सोसाईटीले देशका ७२ जिल्लाका १०५ स्थानबाट सञ्चालित रक्तसञ्चार सेवामार्फत् आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा देशभरिबाट दुई लाख ३६ हजार सात सय ९९ यूनिट रगत सङ्कलन गरी तीन लाख ३७ हजार तीन सय २१ विरामीलाई रगत तथा रक्ततत्व वितरण गरेको जनाएको छ । रेडक्रसका प्रवक्ता दिव्यराज पौडेलका अनुसार यस आ.ब.मा तीन हजार सात सय ५३ वटा घुम्ती रक्त सङ्कलन कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका छन् । नेपालमा रक्तसञ्चार स्थापना भएको ५१ औँ वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा हिजो काठमाडौँमा आयोजित वार्षिकोत्षव कार्यक्रममा यो जानकारी दिइएको हो ।	थप पढ्नुहोस्
२८ जेठ, काठमाडौं । म्याग्दीको बेनी अस्पतालमा चिकित्सा क्षेत्रमा नै दुर्लभ मानिएको पाठेघर बाहिर नफुटेको अवस्थामा रहेको गर्भको सफल शल्यक्रिया गरिएको छ । मङ्गला गाउँपालिका बरञ्जाकी ३० वर्षीया एक युवतीको पाठेघर बाहिर रहेको गर्भ अस्पतालका डा. घिरेन मल्लसहितको चिकित्सकको टोलीले सफल शल्यक्रिया गरेर बाहिर निकालेको हो । तीनवर्ष अगाडि विवाह गरेकी युवतीको पाठेघरभित्र रहेको गर्भ गत चैत ३० गते खेर गएपछि निराश भएर घरमै बसेको अवस्थामा तीनदिनदेखि लगातार दाहिने कोखो दुख्न थालेपछि बेनी अस्पतालमा भर्ना भएकी थिइन् ।	थप पढ्नुहोस्